Ubuntu 20.04 "Focal Fossa" beta dị maka ule | Site na Linux
Ikpeazụ izu ụka Wepụtara Ubuntu 20.04 beta wepụtara «Focal Fossa», nke akara zuru ifriizi site na nchekwa data ngwugwu wee gaa n ’ule ikpeazu na idozi ahụhụ. Versiondị ahụ, nke a na-ahazi dị ka ụdị nkwado ogologo oge (LTS), bụ ndị e guzobere mmelite ha karịa afọ 5 ma hazie ka a hapụ ha na Eprel 23.
N'etiti mgbanwe ndị bụ isi ndị na-ọkọnọ bụ desktọpụ emelitere na Gnome 3.36. Emezigharị isiokwu ndabara maka Yaru, na mgbakwunye na ọnọdụ ọchịchịrị dị na mbụ, ụdị nke atọ zuru ezu ga-apụta.
Ọzọkwa a na-eme atụmatụ ọhụrụ maka menu sistemụ na menu ngwa. Agbakwunyere akara ngosi ndekọ ọhụụ nke kachasị maka ngosipụta na ndabere na ọchịchịrị.
Ọzọkwa, Gnome Shell arụmọrụ kacha mma na onye njikwa windo.
Processor ibu e belata na lags belata ka nsụgharị mmegharị na-emegharị mgbe ị na-eme windo, na-emegharị òké, na imeghe ọnọdụ nyocha.
Agbakwunyere na nkwado maka 10-bit omimi omimi na A na-etinyere nkwado nkwado Fractional na X11, nke dịbu na naanị Wayland. Njirimara a na-enye gị ohere ịhọrọ oke kachasị mma nke ihe ndị dị na nseta na njupụta pixel dị elu (HiDPI), dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ịbawanye ihe ntanetị nke egosiputa ọ bụghị oge 2, mana oge 1.5.
A na-emelite kernel Linux na mbipute 5.4 na LZ4 algorithm na-aga n'ihu na-eji iji kpokọta kernel na mbido buit initramf, na-ebelata oge buut n'ihi nbibi ngwa ngwa nke data.
Na akụkụ nke usoro mmiri emelitere ndị a: Glibc 2.31, BlueZ 5.53, OpenJDK 11, rustc 1.41, GCC 9.3, Python 3.8.2, ruby ​​2.7.0, Ruby on Rails 5.2.3, php 7.4, perl 5.30, Mesa 20.0, PulseAudio 14.0-pre, Firefox 74.0 , Thunderbird 68.6.0, LibreOffice 6.4, QEMU 4.2, libvirt 6.0, Bind 9.16, HAProxy 2.0, OpenSSH 8.2 (na nkwado maka FIDO / U2F ihe abụọ na-egosi akara ngosi) yana na Apache httpd ị kwadoro TLSv1.3 nkwado.
E jiri ya tụnyere ụdị nke LTS gara aga, Storelọ ahịa Snap edochiela sọftụwia Ubuntu dị ka ndabere ngwá ọrụ maka ịchọta na wụnye mgbe na tinye-na nchịkọta.
Ihe ngwugwu maka i386 ije dika na nsụgharị ndị gara aga hapụrụ. Iji gaa n'ihu ọrụ nke mmemme oge ochie nke na-adịgide naanị n'ụdị 32-bit ma ọ bụ chọọ ọba akwụkwọ 32-bit, a chịkọtara ma nyefee usoro dị iche iche nke nchịkọta 32-bit na ọba akwụkwọ.
Mmepe nke ike ibuo iji wụnye mgbọrọgwụ nkebi na ZFS gara n'ihu. Mmejuputa iwu-nke ZFSonLinux emelitere gaa na mbipute 0.8.3 site na nkwado maka izo ya ezo, mwepụ dị ọkụ nke ngwaọrụ, iwu "zpool trim", osooso nke iwu "scrub" na "resilver".
Iji jikwaa ZFS, zsys daemon mepụtara, nke na - enyere gị aka iji sistemụ nwere sistemụ dịgasị iche were ya na ZFS n’otu kọmpụta, na - akpaghị aka were na - echekwa nkewa nke data sistemụ na data agbanwere n’oge ọrụ onye ọrụ.
Na snapshots dị iche iche, ọ nwere ike ịnwe steeti dị iche iche nke sistemụ ma gbanwee n'etiti ha. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na enwere nsogbu mgbe ị wụnye nwelite, ọ ga-ekwe omume ịlaghachi na steeti kwusiri ike site na ịhọrọ snapshot gara aga. Enwere ike iji snapshots rụọ ọrụ na-akpaghị aka na nkwado ndabere na mpaghara data njirimara.
Ọzọkwa agbakwunyere ọhụrụ ikwommiri ihuenyo egosipụta na oge buut na oge crony sync daemon ka emelitere na nsụgharị 3.5 wee pụọ na sistemu site na ịpịnye na nzacha oku.
Ihe onyonyo nnwale ndị ewepụtara adịla njikere iji mee ihe ndị a maka Ubuntu, Ubuntu Server, Lubuntu, Kubuntu, Ubuntu Mate, Ubuntu Budgie, Ubuntu Studio, Xubuntu na UbuntuKylin.
Iji nweta usoro ihe oyiyi nwere ike mere site na njikọ na-esonụ.
Enwere ike ịdekọ onyonyo a na USB site n'enyemaka nke Etcher.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » Ubuntu 20.04 "Focal Fossa" beta dị maka ule
SEED RL, Ihe Ntughari Google Open for Model Artificial Intelligence